Ny futures amerikana mbola miatrika eo ambonimbony, jereo AMZN, BA, REGN, DIS, DPZ, KEYS | | Robots sy famantarana forex automated
Home » Fanadihadiana fototra momba ny tsena Forex »US futures mbola mivoaka, jereo AMZN, BA, REGN, DIS, DPZ, KEYS
Ny futures amerikana mbola miatrika eo an-tampony, jereo AMZN, BA, REGN, DIS, DPZ, KEYS
27.05.2020 Admin 0 Fanadihadiana fototra momba ny tsena Forex,
Ny futures S&P 500 dia mijanona tsara satria mandrisika azy ireo ny mety hisian'ny fampandrosoana a ny vaksiny coronavirus ary ny fanalefahana ny fepetra fanakanana any Etazonia sy manerantany. Ny orinasa Biotechnology Novavax dia nilaza fa ny alatsinainy dia nanomboka ny fitsapana klinika momba ny kandidà vaksiny coronavirus novonoina, ka mahatonga azy io ho iray amin'ny 1 farafaharatsiny mba hizaha toetra ny olona eran-tany.
Any aoriana any dia hanafaka ny US Reserve Reserve ny tenany beige Book tatitra ara-toekarena. Ny Richmond Federal Reserve no handefa ny Fanondroana asa fananganana asa ho an'ny Mey (-40 andrasana).
Mihamitombo ny fiakaran'ny eropeana raha ny nanambaràn'ny vaomiera ny Vaomiera dia hanentana 750 miliara Euros amin'ny famerenana Eoropeana. Ny INSEE any Frantsa dia namoaka tondro zoro ho an'ny fahatokisan'ny mpanjifa amin'ny laharana 93 (ampanantenaina 92), fahatokisan'ny orinasa amin'ny 70 (vs 69 no andrasana) ary ny fahatokisan'ny orinasa amin'ny taona 70 (andrasan'ny 85 andrasana).
Nikatona tamin'ny mena ny indostria aziatika afa-tsy ny japoney Nikkei. Ny governemanta ao Japana dia nanaisotra ny fanjakana voan'ny koronavirus izay nitranga nandritra ny volana Aprily lasa teo.
Mijanona eo ambonin'ireo fiakaran-tsolika WTI Crude Oil futures amin'ny fanantenana ny fiakaran'ny fangatahana eo am-pamokarana ny toe-karena.
Nianjera ny volamena 8.18 $ (-0.48%) ka 1702.41, manodidina ny roa herinandro ambany amin'ny fahatokisana momba ny fanarenana ny toe-karena.
Ao amin'ny forex forex, very dolara amerikana tamin'ny dolara amerikana aorian'ny fampandrenesana ny fonosana fampiroboroboana ny vaomiera EU. Ny EUR / USD dia niakatra 42pips ho 1.1024.
Amazon (AMZN), ilay goavambe e-varotra, dia mety amin'ny fifanakalozan-dresaka mialoha hividianana ny fananganana Zoox fanombohana fiara, hoy i Bloomberg.
Boeing (BA), ilay mpanamboatra fiaramanidina, dia mety hanambara ny fahatapahan-java-miasa amin'ity herinandro ity, indrindra ao amin'ny faritra Seattle, araka ny tatitra samihafa.
Regeneron (REGN): pharma Sanofi frantsay "nanaiky ny hivarotra ny vola 11.8 tapitrisa amin'i Regeneron, tahiry iraisana amin'ny alàlan'ny fanomezana fisoratana anarana amin'ny vidiny 515.00 dolara isaky ny anjara."
Walt disney (DIS), goavambe momba ny fialam-boly sy ny fampahalalam-baovao, dia nanambara fa "ny mpanatanteraka Walt Disney World Resort dia handefa anio any amin'ny Orange County Economic Recovery Task Force any Florida ho fanokafana indray ny zotram-pivarotana ao amin'ilay hotely."
Domino's Pizza (DPZ), mpitarika an'izao tontolo izao amin'ny fanaterana sakafo pizza, dia nilaza fa tamin'ny vanim-potoana martsa 23 ka hatramin'ny Mey 17, na tamin'ny valo volana voalohany tamin'ny ampahefany faharoa, ny fitomboan'ny varotra eran-tany dia 2.9%. Nanampy ny orinasa fa "ny valim-barotra amerikana dia nihena ara-nofo tao anatin'ny herinandro dimy ka hatramin'ny valo tamin'ny ampahefatra faharoa."
Keysight Technologies (KEYS), mpamatsy fitaovana fandrefesana elektronika sy vahaolana amin'ny rindrambaiko, namoaka ny ampahefa-potoana faharoa dia nanitsy ny EPS ny 0.78 dolara, tsy nahitana tombana, nidina avy amin'ny 1.22 dolara isan-taona, tamin'ny varotra 895 tapitrisa dolara, ambanin'ny marimaritra iraisana ihany koa, nidina tamin'ny 1.1 miliara dolara. herintaona talohan'izay.
Previous: XAU / USD Tumbled To 1,705.00
Next: Euro dia miakatra ambony amin'ny tetik'asa fanarenana vaovao an'ny EU